Ciyaaraha Archives - Soomaal Media Group
Left out of squad Oezil says loyalty not reciprocated by Arsenal
in : Ciyaaraha
London (dpa) – Mesut Oezil said on Wednesday he still hopes to get back into the Arsenal side despite being left out of their 25-man squad for the Premier League this season. The 32-year-old, a World Cup winner with Germany and an Arsenal player since 2013, said he was “deeply disappointed” at being omitted from the squad “for the time being”. The playmaker …
Luis Suarez oo jaraya qandaraaskii Barcelona
Barcelona (SMG) -Weeraryahanka kooxda Barcelona ee Luis Suarez ayaa heshiis la gaaray kooxdiisa si uu u dhammeeyo qandaraaskiisa islamarkaana uu heshiis shaqsi ah ula galo kooxda Atletico Madrid, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya Spain. Gool dhaliyaha seddexaad ee reer Katalanis ayaa loo sheegay inuusan dooneynin tababaraha cusub ee Barcelona Ronald Koeman. Suarez, oo 33 jir ah, ayey hal sanno …
Zlatan Ibrahimovic: Waa in la iila dhaqmo sida 20 sanno jir
Milan (SMG) – Rugcadaagii hore ee AC Milan Zlatan Ibrahimovic ayaa dhaliyay labo gool islamarkaana seegay gool furan waxaana uu hubsaday guushii 2-0 ee ay ka gaareen Bologna. 38 jirkaan ayaa jabiyay ismari waaga kadib markii kubad madax ah uu dhaliyay daqiiqadii 35aad wuxuuna ku daray gool labaad oo ahaa rigoore. Milan ayaa sii dheereysatay rikoorkeeda guuldaro la’aanta 15 kulan …
Madaxweynihii hore ee kooxda Real Madrid oo difaacay Josep Maria Bartomeu
Spain, 27 Agoosto 2020. Madaxweynihii hore kooxda Real Madrid ee Ramon Calderon ayaa difaacay madaxweynaha haatan ee Barcelona Josep Maria Bartomeu, kaddib dhaleeceenadii uu la kulmay dhawaantan. Josep Maria Bartomeu ayaa la kulmay dhaleeceeno badan, sababa la xiriira xaalada ay ku sugan tahay kooxda reer Catalonia ee Barcelona gaar ahaan xilli ciyaareedka dhawaan la soo xiray ee 2019/2020. Waxay sheekada sii …
“Qofna ma iibsan doono Lionel Messi sababtan darteed!”
Spain, 27 Agoosto 2020. Magaca Lionel Messi ayaa lala xiriirinayaa inuu ka tagayo Barcelona xagaagan, kaddib markii uu ka codsaday maamulka kooxda inuu doonayo ka tagista Blaugrana. Madaxweynihii hore kooxda Real Madrid ee Ramon Calderon ayaa sheegay in maamulka Barcelona iyo Lionel Messi ay gaari doonaan heshiis is afgarad leh ee ku saabsan bixitaanka laacibka iyadoo aan la galin khilaaf …
Paul Pogba oo laga helay Korona Fayras xilli laga saaray liiska xiddigaha xulka Faransiiska… (Yaa lagu bedelay booskiisa?)
Paris, 27 Agoosto 2020. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa laga helay caabuqa Korona Fayras, waxaana laga saaray liiska xiddigaha xulka qaranka Faransiiska oo markii hore lagu daray. 27-sano jirkaan ayaa loo magacaabay oo ku jiray liiska xiddigaha xulka qaranka Faransiiska ee ciyaari doona kulammada ku soo aaddan ee UEFA Nations League bisha soo socda, laakiin …
Kooxda Chelsea oo ku dhawaaqday inay dhammaystirtay saxiixa daafac Faransiis ah
London, 27 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta ayaa ku dhawaaqday inay dhammaystirtay daafaca reer France ee Malang Sarr ayaa ah mid mustaqbal leh oo aad u da’yar. Waxa ay Blues ciyaaryahan daafaca ah ee Malang Sarr beeca xorta ah uga soo qaadatay naadiga Nice, isagoo ka mid noqday saxiixyada ay xagaagan sameysay kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London. Xiddigan ayaa …
Real Madrid oo la soo wareegtay mid ka mid ah xiddigaha ka xamaasha horyaalka La Liga
Madrid, 27 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa heshiis amaah ah kula soo wareegtay ciyaaryahan Hugo Duro. Naadiga Getafe ayaa xaqiijisay in Hugo Duro uu heshiis hal xilli ciyaareed oo amaah ah ugu biiray Kooxda Real Madrid. Tababaraha Castilla ee Raul Gonzalez ayaa doonayay inuu shaxdiisa ku darsado 20-sano jrikaan, iyadoo heshiiskan ay qayb ka tahay in Los …